မကျြနှာပျေါက အမာရှတျတှနေဲ့ အမညျးစကျတှအေတှကျ ဂငျြးကိုအသုံးပွုနညျး ဂငျြးကိုသုံးပွီးမကျြနှာပျေါက အမာရှတျတှနေဲ့ အမညျးစကျတှအေပွတျဖြောကျနညျး – Khit Thit Lann
October 17, 2020 manang Celebrity, Health, Local 0
ဂငျြးက အစာအိမျအတှကျ အထူးကောငျးမှနျသလို တခွားကနျြးမာရေးအတှကျလညျး ဆေးတဈလကျ အနနေဲ့ အသုံးပွုလို့ ရပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ အလှအပအတှကျလညျး အသုံးဝငျပါသေးတယျနျော.
မကျြနှာပျေါက အမာရှတျတှနေဲ့ အမညျးစကျတှအေတှကျ ဂငျြးကိုအသုံးပွုနညျး (၁) ဂငျြးဟာ မကျြနှာပျေါကအာရှတျတှေ
အမာရှတျရှိတဲ့နရောမှာ ဂငျြးကို ပါးပါးလှီးပွီး ကပျထားပေးပါ။ ဂငျြးခွောကျသှားတဲ့ထိ ထားပါ။ တဈနကေို့ တဈကွိမျလောကျ
ဂငျြးကို တောကျတောကျစဉျး (သို့) အမှုနျ့ကွိတျထားတဲ့ ဂငျြးကိုယူပါ။
ပွီးရငျ သံပုယိုသီး (သို့) သံပုရာသီးကို အနညျးငယျ အရညျညှဈပါ။
သခြောမှပွေီးရငျ မကျြနှာပျေါမှာလိမျးပေးပါ။ မိနဈ ၃၀ လောကျထားပွီး ရဆေေးခပြါ။ တဈပတျကို ၂ ခါလောကျလုပျပါ။
အသားအရေ ကွညျလငျပွီး ဝကျခွံအမာရှတျတှေ ကငျးစငျသှားပါလိမျ့မယျ။
ဂငျြး မှုနျ့ ရယျ နှား နို့ ရယျ ရော ပွီး မကျြ နှာ ပျေါ မှာ နာ ရီ ဝကျ လောကျ လိမျး ထား ပါ ။
ပွီး ရငျ ရေ ဆေး ခြ ပါ ။ တဈ ပတျ ကို ၂ ခါ လောကျ လုပျ ပေး ပါ ။ အ သား အ ရေ ခြော မှတျ ပွီး ပွဈ မြိုး မှဲ့ မထငျ အ လှ ပိုငျ ရှငျ လေ
း ဖွဈ လာ မှာ အ သေ အ ခြာ ပါ ပဲ ။
ဂျင်းက အစာအိမ်အတွက် အထူးကောင်းမွန်သလို တခြားကျန်းမာရေးအတွက်လည်း ဆေးတစ်လက် အနေနဲ့ အသုံးပြုလို့ ရပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အလှအပအတွက်လည်း အသုံးဝင်ပါသေးတယ်နော်.
မျက်နှာပေါ်က အမာရွတ်တွေနဲ့ အမည်းစက်တွေအတွက် ဂျင်းကိုအသုံးပြုနည်း (၁) ဂျင်းဟာ မျက်နှာပေါ်ကအာရွတ်တွေ
အမာရွတ်ရှိတဲ့နေရာမှာ ဂျင်းကို ပါးပါးလှီးပြီး ကပ်ထားပေးပါ။ ဂျင်းခြောက်သွားတဲ့ထိ ထားပါ။ တစ်နေ့ကို တစ်ကြိမ်လောက်
ဂျင်းကို တောက်တောက်စဉ်း (သို့) အမှုန့်ကြိတ်ထားတဲ့ ဂျင်းကိုယူပါ။
ပြီးရင် သံပုယိုသီး (သို့) သံပုရာသီးကို အနည်းငယ် အရည်ညှစ်ပါ။
သေချာမွှေပြီးရင် မျက်နှာပေါ်မှာလိမ်းပေးပါ။ မိနစ် ၃၀ လောက်ထားပြီး ရေဆေးချပါ။ တစ်ပတ်ကို ၂ ခါလောက်လုပ်ပါ။
အသားအရေ ကြည်လင်ပြီး ဝက်ခြံအမာရွတ်တွေ ကင်းစင်သွားပါလိမ့်မယ်။
ဂျင်း မှုန့် ရယ် နွား နို့ ရယ် ရော ပြီး မျက် နှာ ပေါ် မှာ နာ ရီ ဝက် လောက် လိမ်း ထား ပါ ။
ပြီး ရင် ရေ ဆေး ချ ပါ ။ တစ် ပတ် ကို ၂ ခါ လောက် လုပ် ပေး ပါ ။ အ သား အ ရေ ချော မွတ် ပြီး ပြစ် မျိုး မှဲ့ မထင် အ လှ ပိုင် ရှင် လေ
း ဖြစ် လာ မှာ အ သေ အ ချာ ပါ ပဲ ။
စာဖတ်သူမိဘပြည်သူများအနေဖြင့် ကျွန်တော်တို့တင်ပြပေးထားသည်ကိုဖတ်၍ ဗဟုသုတအဖြစ်မှတ်သားစရာတစ်ခုခုကျန်ခဲ့မယ်ဆို